China SPC Ft JD-060 rụpụta na Factory | N'akụkụ
Ọhụrụ ụlọ mma, ụfọdụ ezinụlọ n'ala jupụtara shop osisi n'ala, ma ruo ogologo oge, osisi n'ala deformation, warping onu, ọ bụghị waterproof, ugbu a ihe a bụ karịsịa na-ewu ewu na mba ọzọ, n'ezie 0 formaldehyde, ọ bụghị deformation, sịkwa ewu ~
SPC bụ isi nke calcium powder, nke mejupụtara PUR Crystal Shield transperent oyi akwa, akwa na-eguzogide ọgwụ, akwa ihe nkiri agba, SPC polymer substrate layer and soft and silent rebound layer. Ọ bụ ihe a ma ama na ahịa mma ụlọ mba ọzọ, ọ dịkwa mma maka ala ụlọ.
SPC ala na usoro mmepụta na-enweghị gluu, yabụ anaghị enwe formaldehyde, benzene na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ, ezigbo ala 0 formaldehyde green, agaghị emerụ ahụ mmadụ.
Ebe ọ bụ na SPC bụ nke nwere oyi akwa na-eguzogide ọgwụ, ịnweta nkume ntụ na polymer ntụ ntụ, ọ naghị atụ egwu mmiri n'ụzọ nkịtị, ọ dịghịkwa mkpa ichegbu onwe gị banyere nsogbu nrụrụ na eburu nke mmiri na-apụta n'ụlọ. Waterproof, ebu mmetụta dị mma nke ukwuu, ya mere ụlọ mposi, kichin, mbara ihu nwere ike ji mee ihe.
N'elu ala SPC na-emeso pur Crystal Shield, ya mere ọ nwere ezigbo arụmọrụ mkpuchi mkpuchi. Ọ bụrụgodị na ị gbara ụkwụ na-azọ ụkwụ ya, ọ gaghị ajụ oyi. Ọ dị ezigbo mma. Ọzọkwa, ọ na-agbakwụnye oyi akwa teknụzụ azụ, nke nwere ezi mgbanwe. Ọbụlagodi na ị gbagọrọ ogo 90 ugboro ugboro, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ịda mba. Ọ dị mma maka ezinụlọ nwere ndị agadi na ụmụaka.
SPC n'ala ga-adị "astringent" mgbe ọ zutere mmiri, ya bụ, esemokwu esemokwu ga-ebuwanye ibu, yana arụmọrụ mgbochi na-adị mma. Nguzogide ya dịkwa oke elu, ya bụ, iji bọọlụ nchara n’elu ụlọ ete, a gaghị enwe ọkọ, ọrụ ndụ nke ihe karịrị afọ 20.
Ọzọkwa, ala SPC dị oke ọkụ, nke nwere naanị 2-7.5kg kwa mita mita, nke bụ 10% nke ihe ala ala. Ọ nwere ike n'ụzọ dị irè ịzọpụta ohere dị elu ma belata ikike ịgba nke ụlọ ahụ.
Nke gara aga: SPC Ala 1903
Osote: SPC Ft JD-061
SPC Ft JD-066